Danqaa Loltee Mo’uu fi Baqatee jalaa Hin Baane Seente! |
Home Afaan Oromoo Danqaa Loltee Mo’uu fi Baqatee jalaa Hin Baane Seente!
Damee Boruu: Sadaasa 21, 2020
Kononeel Abiyi Uummatni Oromoo minxaafaa dimaa siif afe gad gonbistee gogaa hoolaa nafxanyaa irraa gangalachuu situ filate. Mul’annii haadha akka ati uummata baruu isaa irratti si baate si guddise gantuuf sababa tahuu hin danda’u. Haati kee akkuma haadha mucaa hundaa waan abjuun agarte yookaan siif hawwitee siif himuun ishee rakkoo hin qabu. Ati garuu waan haatii kee naaf himte jettu garaa kee keessatti qabatee karaa hawwiin ishee siif guutuu dandeessu soqachaa malaan deemuu dhiiftee biyyatti lafaatti gadi baaftee fasafasuu jalqabde. Gaaffa mul’ati haadhaa kee afaan kee keessa bahe Waaqayyo ulee abaarsa isaa si irra buufate.
Harka keen warra Mootii leelisu nafxanyootaaf dabrsitee of laate. Waan si gargaaran fakkaatanii kan Mootii caalu ergamaa Waaqaa “nabiyuun” dhufe jedhanii si gowwomsuu jalqaban. Ni bareeda jennaan mucaan ija babaafte akkuma jedhan atuu waan dhugeefate fakkaata. Yaroo burqa aangoo kee Uummata Oromoo irraa adda si kutan tole jette fudhachuun kee ammam akka gowwaa taate mirkaneessa. Mootummaan qileensa keessatti ijaaramu kamuu lubbuu akka hin dheerane utuu beektu maaliif akka mootummaa qileensa keessatti ijaarachuu akka filate namaaf hin galu.
Nafxanyoon ofii isaanii iyyuu gargaarsa uummataa of duubaa hin qaban. Si miti warri nafxanyootaa iyyuu Uummata Amhaaraa wajjin hin jiran. Nafxanyoon bara baraan Finfinnee keessa taa’anii maqaa Uummata Amhaaraan siyaasaa nagaduu malee qorqalbii Uummata Amhaaraa wajjin jiraatanii fi qabsawwan kan beekan hin qaban. Miliishaa Liyuu Haayiliin Naannoo Amhaaraa kan si wajjin lola seenan lafa argachuuf malee si jaalatanii mootummaa kee jabeessuuf miti. Haalla kana hubachuu hin dandeessu yoo tahe ati gaafa duraa iyyuu aangoo siif hin mallee fudhatee jirta jechuu dha.
Qeerroo fi Qaree Oromoo harka qullaa humna Wayyaanee aangoo irraa darbee ol si baase akka galagltee dhiigaa isaanii dhangalaasitu si gorsan. Qaanii fi saalfii tokko malee gorsa isaanii fudhatee ilmaan Oromoo fixuu itti bobbaate. Walii gala Uummata Oromoo Irratti waraana labsite. Nama akka kee harka isa nyaachisee fi harma hodhee godhatee ciniinu jireenya koo keessatti amma har’a argee hin beeku.
Mukka of irratti akka muraa jirtu maaliif arguu dadhabde? Utubaa mana keessa jiraatuu of irratti jigsaa gadi baatee yaroo nama loluu yaadu sammuun kee nagaa qaba jechuun nama rakkisa. Eenyuun of dubaa of dubaa abdattee akka ati lola deemtu namaa hin galu. Warri nafxanyaa hudduu kee jala deemanii garaa hallayyaa itti si oofaa hudduu duubaan si irraa baqachaa jiru. Waan si hordofanii hallayyaa seenan sitti fakkaata? Hin gowwoomiin yaroo kufaatii kee argan warri atoobisii jalatti si darbu isaan akka tahe bareechitee hubachuu qabda ture. Amma illee guyaan isaa waan sitti dhiye fakkaata.
Yoo sammuun kee nagaa qabatee gara eennyummaa keetti kan deebitu tahe atis akkuma keenya nama. “Nabiyii” miti tahus hin dandeessu. Kana caalaa hin gowwoomiin si gaha. Maalummaa kee fi seenaa kee qaqaa guaracha dibdee jirta. Gara uummata kee itti deebitee dhiifama gaafachuun waan si irraa bareeda. Waraana jalqabde kana loltee mo’uu miti baqatee jalaa bahu iyyuu hin dandeessu. Mee eenyutti baqata? Utubaa kee Uummata Oromoo of jalaa gobsitee jirta. Waraana Wayyaanee ati Eritrea, Somalee, Sudaan Kibbaa fi Emirates daboo kadhatee dadhabaa jirtu Qeerroo fi Qareen Oromoo ati mana hidhaa keessatti gidirsaa fi ajjeesaa jirtu harka qullaa akka injifatan atuu beekta.
Araaramuufis tahe jaarsumaan dubbiin waraanaa akka dhaabbatuuf humna uummata si utubbu yoo qabaate malee innis bu’aan isaa guddaa miti. Guyyaan aangoo kee gabaatee jira. Guyyaa Mootii taatu akka harmee yoo abjuun tahe malee waan dhugaan agartu natti hin fakkaatu. Biyyi lafaa warra badhaasa nageenyaa si kenne dabalatee sitti qaana’ee jira. Biyya keessatti ulfinaa guddaan aangoo jalqabdee salphinaa fi qaanii guddaan goolabaa jirta. Gochuun hafee waan yaadamuu hin qabne warra nafxanyaa garaa ciibsuuf jettee badii ulfaataa rawwachuun aangoon kee akka gufatu goote keessaa:
Uummata Oromoo aangoo si badhaasee Ijoollen Abbaa Gaddaa Masaraa Minilki nu seente jedhee si faarsu ganuu
Ilmaan Oromoo ajjeessuu, hidhuu fi Uummata Oromoo irratti waraana labsuu
Mootummaa Naannoo Oromiyaa dadhabsiisuu fi dhuma irratti diiguu
Sirni federaalaa yoo barbaachise foyyeessuu dhiftee diiguu irratti bobba’uu
Rakkina Naannoo Tigray wajjin qabdu waraanan hiikuuf filachuu.
Yaroo kee si hafe kana keesatti Waaqyyoo, Lafatti fi Namni akka dhiifamaa fi nagaa siif buusuuf:
Ilmaan Oromoo mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran haala duree tokko malee gadi lakkisi
Komandi postii Uummata Oromoo irratti labsamee jiru kaasi, waraanni Oromoo xiyyeefate jiru dhaabi
Uummatni Oromoo Mootummaa Cehumsaa Biyoolesa Oromoo akka dhaabbate tasgabbii nageenyaa ummatu haala mijeessiif
Si gananii waan si dhabamsiisu danda’aniif wal quunnamitii nafxanyoota wajjin qabduu suuta suutaa laafisaa jalaa bahuuf wixxifadhu
Waraanni Naannoo Tigrayi wajjin jalqabame utuu lubbu nmaa fi qabeenya guddaa hin barbadeessiin akka araaran raawwatu
Yaroo kee hafe keessatti Seeraa fi sirni federaalii akka hojii irraa oolu gochuu
Next articleOnly Unconditionally Agreeing To A Peaceful All-Inclusive Transitional System